Guddiga Dalxiiska ee Seychelles ayaa soo bandhigay madal cusub oo dalxiis dalxiis
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jabinta Wararka Seychelles » Guddiga Dalxiiska ee Seychelles ayaa soo bandhigay madal cusub oo dalxiis dalxiis » Page 2
Jebinta Wararka Caalamka • Jabinta Wararka Seychelles • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Investments • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Guddoomiyaha daahfurka ayaa ahaa Madaxa Fulinta ee Dalxiiska Seychelles Gudiga, Mrs. Sherin Francis, oo iyadu bixisay warbixin ku saabsan barnaamijka 'ParrAPI platform' iyo sida dalxiiska oo dhami u heli doono faa'iidooyinka mashruucan cusub.
Madaxa mashruucu wuxuu ahaa Kooxda Suuqgeynta Dijital ah ee 'STB', oo ka shaqeynayay barnaamijka 'ParrAPI platform' tan iyo 2019.
Agaasimaha Suuqgeynta Dijital ah, Mr. Chris Matombe, oo goobjoog ka ahaa daahfurka, ayaa ku nuuxnuuxsaday ahmiyadda ay leedahay barxadda, isagoo yiri, “Marka la hirgeliyo ParrAPI, STB waxay ku jiri doontaa boos wanaagsan oo lagu taageerayo laguna caawiyo Warshadaha Dalxiiska Seychelles suuqgeynta dhijitaalka ah. ParrAPI waxay na siisaa hanaan wax ku ool ah oo lagu maareeyo liisas fara badan waxaanan hadda ku soo bandhigi karnaa meherado badan meheradaheena macaamiisha. ”
Intii ay soo bandhigeysay, Mrs. Francis waxay sidoo kale sharaxday in xogta ay bixiyeen hawl wadeenada laftoodu ay tahay mid tayo leh oo la hubo oo ay ansaxisay STB waxaana lala wadaagi karaa qeybiyeyaasha internetka ee kor u qaada wax soo saarka iyo adeegyada dalxiiska Seychelles ee adduunka oo dhan. ParrAPI waxay hubisaa in xogta la hayo ilaa taariikhda, iyadoo la siinayo dadka soo booqda macluumaad ku filan si ay u qorsheeyaan safarkooda ka hor waqtiga.
Haysashada hawl wadeenada dalxiiska deeq bixiyeyaasha xogta oo ku qoran luqado kala duwan oo leh waxyaabo la yaab leh sida sawirro iyo fiidiyowyo, oo la cusbooneysiiyo mar walba, hal meel oo bartamaha ah ayaa ahayd mid ka mid ah caqabadaha naga hor yimid waxaana naga go'an inaan xal u helno arrintaas. ParrAPI waa hab wax ku ool ah oo la isugu keenayo halka loo socdo hal marxalad waxaana rajeyneynaa u oggolaaneysa martida inay soo ururiyaan macluumaadka ugu badan hal mar isla markaana ay isla beddelaan ballansashada. Madashu waxay siin doontaa soo-saarista dhijitaalka ah iyo muuqaalka dhammaan hawlwadeennada dalxiiska ee halkaas ku taxan, haddii ay ka go'an tahay inay nala shaqeeyaan, ”ayay tiri Mrs. Francis.
Mrs. Francis waxay mahadcelin iyo mahadnaq dhab ah u gudbisay kooxdii ka shaqeysay mashruuca, iyadoo bogaadisay sida ay uga go'an tahay inay mashruucan guuleystaan.
Adeeg bixiyaasha dalxiiska ee ka faa'iideysan doona ParrAPI waxaa ka mid ah hoyga, soojiidashada, dhacdooyinka, hawl wadeenada, bixiyeyaasha cuntada iyo cabitaanka, adeegyada guud, shaqaaleeyaha, safarada, iyo gaadiidka.
Dib-u-habeynta warshadaha, ParrAPI waxay dhigeysaa ciyaartoyda warshadaha dalxiiska meel u dhow dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah waxayna la gali doonaan suuqyo cusub iyada oo loo marayo joogitaanka dhijitaalka ah ee wax ku oolka ah.